evan mawarire on News24
ARTICLES RELATING TO EVAN MAWARIRE
Zimbabwean pastor freed on bail says hundreds in jail need aid after beatings by security forces.
Leading Zimbabwean activist and pastor Evan Mawarire has been freed on bail after being detained for 13 days following violent anti-government protests.
Kenyan President Uhuru Kenyatta has declared the deadly hotel attack in Nairobi over, and Zimbabwe police have arrested prominent government critic Pastor Evan Mawarire.
Zimbabwe pastor Evan Mawarire sues police for $65 000 – report
Zimbabwean cleric, Evan Mawarire, has reportedly "filed a $65 000 lawsuit against the Zimbabwe Republic Police for unlawful arrest and detention at the height of his anti-government protests last year".
A prominent Zimbabwean activist has voiced doubt that upcoming elections - the first since Robert Mugabe's ouster - will be credible, as the new president's commitment to basic rights was still unclear.
Activists and human rights groups are already expressing concerns as Zimbabwe's incoming leader is set to be sworn in.
Zimbabwe's High Court has ordered the government to restore full internet to the country. The court ruled that the government's shutdown of the internet was illegal.
A Zimbabwe lawyers' group says a prominent pastor and activist Evan Mawarire has been charged with subverting a constitutional government, and Kenyan police say 11 arrested after deadly hotel attack.
Zimbabwe police have arrest prominent government critic Evan Mawarire, as a crackdown grows over protests against dramatic fuel price hikes in the economically shattered country.
Zimbabweans have reacted with outrage to a sharp rise in fuel prices announced by President Emmerson Mnangagwa in a move to improve supplies as the country struggles with its worst gasoline shortages in a decade.
Zimbabwean cleric Evan Mawarire has joined the race in the upcoming election as an independent candidate contesting for a council seat.
Zimbabwean activist pastor Evan Mawarire has been acquitted of trying to overthrow former president Robert Mugabe in protests last year that shut down major cities and paralysed public transport.